MW CMC Oo Kuguulaystay Tartanka Orodka - Cakaara News
MW CMC Oo Kuguulaystay Tartanka Orodka
jigjiga(CN) Arbaco, 18ka Nov.2015, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamud Cumar ayaa kuguulaystay tartanka orodka 3,000m oo loo qabtay golaha kabineega xukuumada DDSI iyadoo halkaa lagu gudoonsiiyay bilad dahab ah iyo koob meesha uu wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo cayaaraha mudane Maxamed Bile Xasan uu kaalinta 2, aad galay iyadoo kaalinta 3, aadna uu galay wasiirka gaadiidka iyo ganacsiga mudane Khadar Cabdi Ismaaciil.
tartankan ayaana waxaa kasoo qaybgalay hogaaminta xukuumada, dhamaan shaqaalaha kaladuwan e xafiisyada heer deegaan, shacabwaynaha magaalada jigjiga iyo kooxda baambayda oo iyadu runtii wacdaro kamuujisay furitaankii tartanka.
Tartankan oo loogu magac daray ‘‘orod waa caafimaad’’ayaa ahaa mid ka kooban labo qaybood oo kala ah 5,000m iyo 3,000m. Qaybta tartanka 5,000m ayaa waxaa kaalinta 1,aad ku guulaysatay Afhayeen ku xigeenka goloha xildhibaanada marwo Fardowsa Maxamed meesha uu kaalinta 2,aad galay maareeyaha guud ee wakaalada dakhliga mudane Axmed Maxamed Shugri iyadoo kaalinta 3,aad uu galay wasiirka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Axmed Maxamed Cabdi.
Hadaba tartankan oo kadhacay garoonka cayaaraha kaladuwan ee DDSI ayay ujeedadiisu ahayd mid xooga lagu saarayay kor u qaadida cayaaraha laguna dhiirigalinayay dhalinta soo kacaysa si deegaankeena looga helo dhalin caafimaad qabta oo guulo waa wayn kakeenta tartamada orodka heer qaran iyo heer caalamba.
Ugudanbayna, mas’uuliyiinta kaalmaha hore kagalay tartankii kakoobnaa labada qaybood oo ugu horeeyo madaxwaynaha ayaa uga waramay shabakada cakaara xaalada shucuurtooda. Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo cabiraya dareenkiisa ayaana sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guusha uu kasoo hoyiyay orodka 3,000m. wuxuuna u hambalyeeyay dhamaan xubnihii kaalmaha hore galay gaar ahaan afhayeen kuxigeenka golaha xildhibaanada marwo Fardowsa Maxamed oo runtii noqotay orodyahan dumar ah oo karti iyo ad adayg muujisay xiligii tartanka gashayna kaalinta 1,aad ee tartanka 5,000m iyo waliba kaalinta 1,aad ee dumarka. Madaxwaynaha ayaana hadalkiisa kusoo gabagabeeyay in tartanka orodka ee hogaaminta xukuumadu yahay mid lagu dhiirigalinayo jiilka soo kacaya si loo helo dhalinyaro deegaanka uga tartanta heer qaran iyo heer caalam labadaba iyo in guud ahaan cayaaruhu yihiin caafimaad. Mas’uuliyiintii kale oo dareenkooda cabiraya ayaa iyana sheegay inay farxad u tahay kaalmaha ay galeen. Tartamada noocan ahna ay aad muhiim u yihiin si ay dhalintu u higsadaan siday orordka guulo uga keeni lahaayeen.